» शाहरुख खानले आफ्नै ज्वाँई कुटेपछि…..!
शाहरुख खानले आफ्नै ज्वाँई कुटेपछि…..!
२५ पुष २०७६, शुक्रबार २१:१७
बलिउडकी प्रसिद्ध निर्देशक तथा कोरियोग्राफर फराह खानले बिहिबार जन्मदिन मनाइन् । फराह आफ्नो शान्त स्वभावको लागि परिचित छिन्।
फराहले निर्देशकको शुरुआत फिल्म मे हुँ नाु बाट गरेकी हुन्। यस अघि उनी बलिउड फिल्महरूमा कोरियोग्राफरको रूपमा काम गर्थिइन्। मे हुँ नाु का नायक शाहरुख खानसँग फराह खानको राम्रो सम्बन्ध छ । दुवैले एक अर्कालाई दाजु बहिनि भनेर सम्बोधन गर्छन् । तर एक पटक शाहरुखले फराह खानका श्रीमान शिरीष कुन्दरलाई कुटेका थिए ।
शिरीषको कारण फराह खान र शाहरुख खानको सम्बन्धमा दरार आएको थियो । दुबै उद्योगमा भाई-बहिनीको रूपमा चर्चामा थिए । तर शिरीषले एक पटक शाहरुखको फिल्म रावणुको बारेमा गलत कुरा गरे।
यसबाट शाहरुख खान उनीसँग धेरै रिसाए। यस अघि शाहरुखले फिल्म तीस मार खानु मा अभिनय गर्न इन्कार गरेका थिए। शाहरुखलाई फिल्मको कथा मन परेन । त्यसबेलादेखि शिरीष र शाहरुखले एक अर्कालाई मन पराउन छाडे।
यसै कारणले शाहरुखले एक पटक संजय दत्तको पार्टीमा शिरीषलाई थप्पड लगाए। तब फराहले दुबैलाई शान्त पारेकी थिइन्।
मे हूँ नाु पछि फराह खानले ओम शान्ति ओमु, तीस मार खानु र ह्याप्पी न्यू ईयरु जस्ता फिल्महरू निर्देशित गरिन् । फराह खानले २००४ मा शिरीष कुन्दरसँग विवाह गरेकी थिइन्। शिरीष कुन्दर र फराहको प्रेम कहानी पनि फिल्म जस्तै छ। फराहका पति शिरीष बलिउडमा आउनु अघि इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर थिए र उनले मोटोरोला कम्पनीमा काम गर्थे। चार बर्ष कम्पनीमा काम गरिसकेपछि शिरीषले उद्योग परिवर्तन गरेर बलिउडमा भाग्य जोख्न आए ।
शिरीषले फिल्म उद्योगमा सम्पादकको रूपमा काम गरे। शिरीषको फराहसँग पहिलो भेट फिल्म ुमै हूँ नाु को सेटमा भएको थियो। दुबै सेटमा सधै झगडा गर्दथे। सो समय यी दुवै विवाह हुनेछन् भनेर कसैले सोचेका थिएनन् । तर अचानक एक दिन शिरीषले फराहलाई प्रस्ताव गरे।
त्यस समयमा फराह ३२ र शिरीष २५ वर्षका थिए। शिरीषको प्रस्ताव स्विकार गर्न फराहले लामो समय लगाइन् तर अन्ततः दुबैले २००४ मा बिहे गरे । उनीहरूको विवाहको चार बर्षपछि फराह खानले तीन वटा बच्चालाई जन्म दिइन् । फराह खानसँग विवाह गरेपछि शिरीषले तीस मार खानु र जोकरु जस्ता फिल्महरूको कथा पनि लेखे। तर दुबै फिल्महरू बक्स अफिसमा फ्लप भए।
अक्षय कुमारले यी दुवै फिल्महरूमा अभिनय गरेका थिए। फिल्म जनेमानु मा पनि शिरीष कुन्दरले लेखक गरेका थिए। शिरीषले कृतिु नामको छोटो फिल्म पनि बनाइसकेका छन ।